Profesora John Whitehall. Dysphoria momba ny lahy sy ny vavy. Lahatsary 12 napetraka miaraka amin'ny Transcripts. |
Ny profesora John Whitehall. Dysphoria zazalahy. 12 horonantsary napetraka miaraka amin'ny Transcripts.
Dysphoria momba ny lahy sy ny vavy / By nahatonga
Tsindrio eo ary Jereo ireo horonantsary an'ny Profesora John Whitehall miteny (amin'ny anglisy ihany) na horonan-taratasy ny pejy ary kitiho ny sy Vakio ny Transcripts izay lazainy amin'ny fiteninao amin'ny alàlan'ny Google Translate eo an-tampon'ity pejy ity. Ny pdf isaky ny sora-tanana dia azo sintonina. Voasoratra amin'ny teny Anglisy izy ireo saingy nanome rohy mankamin'ny tranokala iray ahafahanao mampakatra ny pdfs ary hadika amin'ny fiteninao izy ireo.
Zahao eto ny horonantsary momba ny zazakely Dysphoria.
Horonan-tsary 1 - Famaritana ny fisavoritahana eo amin'ny lahy sy ny vavy - (Fizarana 1).
Horonan-tsary 2 - Famaritana ny fisavoritahana eo amin'ny lahy sy ny vavy - (Fizarana 2).
Lahatsary 3 - Làlana ara-pahasalamana mankany amin'ny fanendrena indray ny lahy sy ny vavy - (Fizarana 1).
Lahatsary 4 - Làlana ara-pahasalamana mankany amin'ny fanendrena indray ny lahy sy ny vavy - (Fizarana 2).
Horonan-tsary 5 - Fisafotofotoana ara-nofo sy aretin-tsaina.
Horonan-tsary 6 - Hormone Blockers & The Limbic System.
Horonan-tsary 7 - Mpanakana ny homamiadana - ny fiatraikany amin'ny firaisana.
Horonan-tsary 8 - Hormone miampanga.
Horonantsary 9 - Fandidiana famerenana amin'ny laoniny ny firaisana.
Horonan-tsary 10 - Sekoly azo antoka momba ny miralenta - Tenety.
Horonan-tsary 11 - Sekoly azo antoka momba ny lahy sy ny vavy - Misy vokany.
Horonan-tsary 12 - Gender Dysphoria - Counseling Psychological.
Vakio eto ny horonantsary momba ny horonan-tsary momba ny zazakely Dysphoria.
Malalaka ianao misintona ny rakitra PDF. Azonao atao ny mampiasa mpandika teny an-tserasera an-tserasera handikana ireo PDF amin'ny fiteninao.
Azo idirana eto ny mpandika teny amin'ny Internet: -